Ukuphathwa kwe-anti-crisis: izici zayo eziyinhloko
Ukulawulwa kwe-anti-crisis kuye kwaba yinto evelele eminyakeni yezinkinga zemali emhlabeni jikelele kuma-2000s. Ngokwezincwadi zabalobi bezinye izizwe, lo mqondo ubonisa ukuthuthukiswa kwezinyathelo ezithile zokuzinzisa nokuthuthukisa isimo sezomnotho ezweni.
Uma sicabanga ngaleli gama ezingeni le-microeconomics, ukulawulwa kwezinkinga zokulwa nokuhlukunyezwa ukuthuthukiswa kwezinyathelo zokuqoqa zonke izinsiza ezitholakalayo zebhizinisi ukuze kuqhutshwe imisebenzi ezimweni ezinzima kakhulu nezizinzile. Eqinisweni, ngesikhathi sezinkinga, izinhlangano eziningi zixhasana emgodini wokuqedwa, njengoba zingazi ukuthi yini ongayilindela.
Ukuze kuqaliswe ukulawulwa kokulwa nobugebengu ngendlela efanele, kubalulekile ukukhomba izimbangela zenkinga enkulu kangaka. Ngenxa yalokhu, ochwepheshe abaningi baphatha leli gama njengendlela yokwenza izinyathelo zokuqeda izimbangela eziholela ekuthuthukiseni inkinga. Ngeshwa, ezweni lakithi namuhla izinga lesitifiketi sabaphathi aluphezulu ngokwanele. Yingakho inani lamaphutha nezinqumo ezingalungile ezithathwe ngabasebenzi bezikhundla zokuphatha zikhuphuka. Kuyazuzisa ukuqonda ukuthi ngesikhathi sobuthakathaka kwezobuzwe bezwe kudingekile ukuba ulahle izimpahla zamabhizinisi nezinhlangano ngendlela ehlukile. Kunoma yikuphi, kuzodingeka sishintshe kwimodi yezomnotho, ngoba isimo esijwayelekile emakethe kuyoba nzima kakhulu, futhi ukwehla kwesidingo ngeke kukugcine ulinde.
Ukulawulwa kwe-anti-crisis akuhlosile ekuqedeni ukwehluleka okwesikhashana kwemithombo yezezimali, kodwa futhi ekufezeni izikhundla eziqinile emakethe. Futhi ngenxa yalokho, kubalulekile ukusebenzisa lezo zixhobo eziye zafakazela ukuthi ziphumelela kanjani kusibonelo sezinkathi ezedlule. Yiqiniso, ungalahli izinto ezintsha, ngoba ezinye izixazululo zingase zibe yingozi futhi zibe yingozi, kodwa empeleni zithuthukise kakhulu isimo senkampani. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuphatha - ukuphatha, kanye nokuphathwa okufanelekayo kwazo zonke izimpahla ezikhona zebhizinisi. Ngakho-ke, zonke izenzo ezamukelwa umholi kumele zicatshangelwe ngokucophelela ukuze kufezwe umgomo ovamile. Futhi zonke lezi zinyathelo kufanele zibe yinto eyodwa esebenza ngokugcwele.
Ngokujwayelekile esimweni esibucayi, awukwazi ukwenza ngaphandle kokulahlekelwa okuthile. Lokhu kuhlanganisa ukwehla komkhiqizo futhi, ngenxa yalokho, ukunciphisa inzuzo. Ukuze imenenja, lokhu kulahlekelwa okungathí sina okuvimbela ukusebenza okujwayelekile kwebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, ukuncipha kwezinga lokuzuzisa kubangela ukunciphisa amaholo abasebenzi, futhi ngezinye izikhathi ukukhiqiza ukunciphisa okukhulu. Umbuso awunaso nesithakazelo emiphumeleni enjalo, njengoba kunezimpikiswano ezibukhali ezingeni lokungasebenzi, okubeka umthwalo osindayo emnothweni wezwe.
Ochwepheshe abaningi abasebenzisa ukulawulwa kwezinkinga, bheka njengomsebenzi oyinhloko, ukunciphisa kakhulu izindleko zokukhiqiza. Kodwa lezi zenzo kuphela ngeke zanele, ngoba kule nkinga kudingekile ukuba "ushaye" izinyathelo eziyinkimbinkimbi. Umsebenzi onzima kunazo zonke ngaphansi kwale mibandela kuyoba ukuthola imithombo yokuxhasa ngeminye imisebenzi, njengoba ukuboleka kwebhange kuphelelwa noma kuqhutshwa ngaphansi kwesithakazelo esikhulu nokubambisana okuphezulu. Akuzona zonke izinkampani ezingakwazi ukukhokhela okunethezeka okunjalo njengemalimboleko nemalimboleko, ikakhulu amabhizinisi amancane naphakathi. Yiqiniso, uhulumeni unikeza izimali kulolu hlobo, kodwa hhayi zonke izinkampani zizokwazi ukuthola usizo lukahulumeni.
Ngakho-ke, ukuze sihlale sibhekene nesikhathi esibucayi sezinkinga zomhlaba, kubalulekile ukuthi sibhekane nomthwalo wemfanelo mayelana nokuhlelwa kokuqhubeka kwemisebenzi yokukhiqiza. Umholi ofanelekayo uzothola ukuqonda abasebenzi bezinhlangano, ngoba lokhu kuzokusiza ukugcina izinkomba zokusebenza ezingeni elifanayo, nezindleko eziphansi zomsebenzi noma imisebenzi embalwa.
Ukwandisa ukuncintisana kwebhizinisi: ikhwalithi njengento eyinhloko
23 abantu abaphumelelayo, abakhetha ukusheshe sivuke kakhulu
Thola ukusebenza kanye zezimali. Izinga umphumela ukuhlolwa factor ifomula asizakale tekusebenta
Uwoyela Fish. Ukubuyekeza, izakhiwo ewusizo
Ukupheka isaladi "Camomile ensimini"
Metro "Timiryazevskaya" kumephu eMoscow
"UMuntu Human": nabalingisi izindima. American TV ewuchungechunge uMuntu Human 2011
Ihhotela Casa De Royal 3 * (India, Goa): ukubuyekezwa, izincazelo, izinombolo kanye nokubuyekeza
Amafutha ukhunta ngezinyawo zakhe
Ukuqunjelwa e ingane nyangazonke: yini okufanele uyenze? Izimbangela kanye nokwelashwa ukuqunjelwa ebantwaneni
Ubuthi 4. Kuhle lokho kuqeda umdlalo